Dib u eegista ZTE Blade V8 oo leh astaamo, qiimo iyo ra'yi | Androidsis
ZTE ayaa hadda lagu soo bandhigay qaab dhismeedka MWC ZTE Blade V8, oo ah taleefan ku dhaca suuqa si uu u helo meel dhexe. Hubkooda? Nidaam kamarad laba-geesood ah oo runtii awood badan, oo ay suurtogal tahay in laga qaado sawirro 3D ah, dhawaq cajiib ah iyo qiimo burbur: waxay ku kacaysaa 269 euro. Dhammaantoodna waxaa lagu qaabeeyey jirka aluminium.
Adiga oo aan ku mashquulin, waxaan kaaga tagayaa adiga dib u eegista Isbaanishka ee ZTE Blade V8, Taleefan aan istcimaalayay labadii todobaad ee lasoo dhaafay oo dhadhan weyn ku reebay afkayga.
1 ZTE Blade V8 wuxuu leeyahay dhammeystir aad u wanaagsan inuu noqdo dhexdhexaad
2 Shaashadda ZTE Blade V8 wax ka badan ayaa fulisa hadafkeeda
3 Dhawaaqa cajiibka ah
4 Akhriste faro ka fajiciso xawaareheeda
5 Android 7.0 oo ku hoos jira lakab ka buuxo qalabka wax lagu rakibo
6 ZTE wuxuu ku sharxayaa xaqiiqda dalwaddii iyadoo la socota ZTE Blade V8
7 Kaamiro qaadashada sawirrada 3D
ZTE Blade V8 wuxuu leeyahay dhammeystir aad u wanaagsan inuu noqdo dhexdhexaad
Sida caadiga ah, waxaan bilaabi doonaa falanqeyntan anigoo ka hadlaya qaabeynta ZTE Blade V8. Runtuna waxay tahay inay ka mid tahay awooda taleefankan. Bilawga, taleefanka cusub ee soo saaraha Aasiya wuxuu leeyahay jiifku biraha taasi waxay siineysaa terminaalka muuqaal aad u sarreeya iyo dareen.
Jidhkiisu, wuxuu ka samaysan yahay aluminium, si wanaagsan ayaa loo dhisay, siinta dareen adag oo adkaysi. Waxa caadiga ah ee noocan ah ayaa ah in la helo taleefan ka samaysan caag iyo aluminium aluminium ah, sidaa darteed xaqiiqda ah in ZTE ay dooratay waxyaabo sharaf leh oo loogu talagalay dhismaha V8 waa faahfaahin aan ku qanacsanahay oo ka soocaysa tirada badan. ee tartamayaasha.
Sidii aan u sheegay, taleefanka ayaa aad ugufiican gacanta, waa ergonomic iyo fududahay in la qabto, sidaa darteed waxaan ku gaari doonnaa meel kasta oo ka mid ah shaashadeeda 5.2-inji iyadoo la isticmaalayo taleefanka gacanta keliya. Intaa waxaa sii dheer, 141 garaam oo culeyskiisu wuxuu ka dhigayaa aaladdan mid casri ah oo casri ah
Dhinaca hore waxaan ka helaynaa shaashad ku fadhida wejiga hore oo dhan, oo aan lahayn muraayadaha hore ee xad-dhaafka ah dhammaantoodna ku duugan 2.5d madarad taasi waxay u keenaysaa gargaar xarunta.
Layaabka ugu horeeya waxaa laga helaa xaga sare, halkaas oo aan ka helno kamarad 13 megapixel hore ah oo ka farxin doonta dadka is jecel. Qeybta hoose waxaan leenahay Badhanka guriga, oo u shaqeeya sidii shidma faraha, oo lagu daray laba badhan oo dhinac kasta ah si aad uhesho hawlo fara badan ama aad dib ugu soo noqoto. Badhamadu waxay leeyihiin LED yar oo buluug ah oo iftiiminaya si ay ugu fududaato helitaankeedu, in kastoo dhawr maalmood ka dib aad ogaan doonto booska uu ku yaal badhan kasta.
Taleefanka ayaa leh aluminium dhammaystirka dahabka ee taleefanka ka dhigaya mid aad u sarreeya haddii ay suurtagal tahay. Dhinaca midig waa meesha aan ka heli doonno badhanka dabka iyo deminta qalabka oo ay weheliyaan furayaasha xakameynta mugga.
Dheh eBadhanka korontada ayaa leh qallooca ka duwan furayaasha kale. Safarka iyo iska caabbinta cadaadiska badhanka ayaa qumman, oo siinaya dareen adag oo adag. Qaybta kore waxaan ku arki doonaa soosaarka 3.5 mm si loogu xiro sameecadaha dhagaha, halka qeybta hoose ay tahay meesha ZTE ay isku dhaftay sameecadaha iyo makarafoonada terminalka, marka lagu daro soo saarida micro micro.
Gadaalku waa halka ZTE Blade V8 uu aad ugu kala duwan yahay. Waxa ugu horreeya ee muuqda waa nidaamka labada qol oo ku yaal qaybta sare, halka dhexda aan ku arki doonno astaanta astaanta.
Marka la soo koobo, taleefan si aad u wanaagsan loo dhisay in kasta oo qiimahiisa iyo tan, gaar ahaan dhabarkiisa, Waxay siineysaa taabashadaas gaarka ah ee aan wax badan uga maqnay boosteejooyinka qaarkood.
Astaamaha farsamada ee ZTE Blade V8
Tusaale Blades V8
Nidaamka hawlgalka Android 7.0 Nougat hoosta Mifavor 4.2
Screen 5.2-inch 2.5D FullHD IPS LCD iyo 424 pixels halkii inji
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 435 Octa-Core Cortex A53 1.4GHz
RAM 2 ama 3 GB waxay kuxirantahay qaabka
Kaamirada gadaal Dual 13 megapixel + 2 megapixel system leh LED flash iyo HDR
Kaameradda hore 13 MPX / 1080p fiidiyow
Tilmaamo kale shidma faraha / Accelerometer / metallic dhameystirka / raadiyaha FM
Batariga 2730 mAh aan laga saari karin
Cabbirada 148.4 x 71.5 x 7.7 mm
Peso Gram 141
Qiimaha 269 euros
Sidaad aragtay waxaa jira laba nooc oo V8 ah, waxaan ku tijaabinay qaabka 3 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd gudaha ah. Runtii waxaan kahadleynaa taleefanka dhexdhexaadka ah - sare waana aragnaa markaan daalacanayno isdhexgalkiisa iyo codsiyada socda.
Waana in taleefoonku u shaqeeyo si aad u dheecaan leh, isaga oo maraya miisaska kala duwan si deg deg ah oo deg deg ah. Waxaan sidoo kale awooday inaan ku riyaaqo ciyaaro ubaahan culeys weyn oo muuqaal ah aniga oo aan lahan wax nusqaan ah ama joogsi ah, marka waad nasan kartaa ZTE Blade V8 ayaa dhaqaajin doona ciyaar kasta ama codsi kasta oo aan dhibaato weyn qabin.
Waxaan horey u ogaanay waxqabadka processor-kaaga Qualcomm Snapdragon 435 iyo Adreno 505 GPU oo ay weheliso 3 GB oo RAM ah Iyagu waa xal dhammaystiran oo aad isu dheellitiran si looga faa'iidaysto inta badan cayaaraha aannu ugu jecel nahay. Aad ayey u xun tahay in aysan haysan NFC maadaama aan awoodi doonin inaan lacag ku bixinno nidaamkan, laakiin beddelkeeda ZTE V8 wuxuu la yimaadaa FM Radio.
Is-xukunka ayaa ka badan wax la aqbali karo, waxaan isticmaalayay taleefanka muddo laba toddobaad ah sidii inay tahay taleefannadayda casriga ah iyo Blade V8 waxay u adkeysaneysay maalintii oo dhan dhibaato la'aan. Dabcan, waxaad hubaal ahaan u baahan doontaa inaad ka qaaddo lacag maalin kasta ama ugu badnaan maalin iyo badh haddii aad si dhakhso leh u deg degto.
Isku soo wada duuboo, waa taleefoon kaas waxay leedahay waxqabad aad u fiican haddii aan tixgelinno qiimaheeda taasina waxay dabooli doontaa in ka badan inta ku filan baahiyaha isticmaale kasta. Inbadan oo ku saabsan shaqada wanaagsan ee ay qabatay ZTE labadaba qaybta codka iyo shaashadda qalabkani ku dhejisan yahay.
Shaashadda ZTE Blade V8 wax ka badan ayaa fulisa hadafkeeda
Shaashaduna waa mid ka mid ah awoodaha xalka cusub ee ZTE. ay IPS LCD panel oo leh xagal 5.2 inji ah iyo xalka buuxa ee HD wuxuu bixiyaa 424 pixels halkii inch oo waxaan horey u ognahay waxqabadka wanaagsan ee noocan ah guddi.
Shaashadda ZTE Blade V8 waxay bixisaa xoogaa midab cad oo fiiqan, oo bixiya sawirro macquul ah. Intaa waxaa dheer, barnaamijka taleefanka ayaa noo oggolaan doona inaan dooranno dhererka iyo heerkulka shaashadda. Sidii aan u sheegayay, sida caadiga ah midabada waxay u egyihiin xoogaa dheregsan, laakiin waxaan uga tagi lahaa sidaas oo ma taaban doono cabirkan maaddaama runta ay tahay in marka la eego shaashadda ay runti u muuqato mid wanaagsan.
Iftiinku aad buu guriga ugu saxanyahay, in kastoo duruufaha dhalaalaya waxyar u dhutinayaan. Xasilloon, Waxaad u isticmaali kartaa taleefanka dhib la'aan maalin iftiin badan oo qorrax leh laakiin xoogaa xoogaa ah ayaan seegay.
ka xaglaha daawashada aad ayey u fiican yihiin, Ma arki doonno isbeddellada midabka illaa aan taleefanka aad u badan u janjeerinno, marka dhinacan shaqada waa mid aad u wanaagsan. Ugu dambeyntii sheeg in xawaaraha jawaabta marka la eego isticmaalka uu sax yahay taabashaduna ay wacan tahay.
Shaashad aad u fiican iyo in suurtagalnimada in la beddelo heerkulka midabka ayaa noo oggolaan doonta inaan ku ciyaarno xulashooyinka illaa aan ka helno ikhtiyaarka aan ugu jecel nahay.
Dhawaaqa cajiibka ah
Markii aan lahaa fursadda lagu tijaabinayo ZTE Axon 7 Waxaan aad ula yaabay tayada maqalka ee ay bixiso terminal-kan. Taleefanka cusubna wuxuu bixiyaa tayo aan caadi ahayn oo arrintan la xiriirta. Kamaan filaynin in dhawaaqa ka imanaya dadka ku hadla ZTE Blade V8 uu noqonayo mid aad u cad oo awood badan. Ilaa aad ka gaadhayso 90% heerka muggu uma muuqdo dhawaaqa qasacadaysan ee dabeecadda ah waxaanan horeba kuugu sheegayaa in 70% ama 80% ay ka badnaan doonto in ku filan in si fiican loo dhagaysto filim.
Iyo waxa laga sheegayo Barnaamijka Dolby leh taleefoonkani. Hadaad heysato dhagaha dhagaha wanaagsan, waxaad ugu raaxeysan doontaa heesahaaga si buuxda. Waxaan isku dayay tayda RHA T20 moodello kala duwan oo aan ku ogaaday in ZTE Blade V8 ay uga fiican yihiin sida loo yaqaan 'Huawei P9', ka taxaddar shaqada ay qabatay shirkadda ZTE arrintan.
Akhriste faro ka fajiciso xawaareheeda
ZTE Blade V8 wuxuu leeyahay a dareeraha faraha ee ku yaal dhinaca hore. Shakhsi ahaan, waxaan jeclahay inbadan in dareemayaasha biometric-ka ay ka dambeeyaan terminalka, laakiin haddii inta badan soosaarayaasha ay ku sharaddeeyaan inay horay u dhigaan waxay noqon doontaa wax. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaad ula qabsatay booska akhristaha faraha.
Shaki la'aan akhristayaasha ugu fiican waa kuwa Huawei, laakiin waa inaan dhahaa taas Waxaan la yaabay xawaaraha akhriska ee dareeraha sawirka faraha ee lagu rakibay ZTE Blade V8. In kasta oo ay run tahay in mararka qaarkood aysan aqoonsanayn faraha, haddana akhristaha si dhakhso leh ayuu u shaqeeyaa isla markaana isla markiiba wuu aqoonsanayaa faraha. Ahaanshaha meel dhexdhexaad ah waxaan u maleynayaa inaanan dalban karin wax intaa ka badan arrintan.
Android 7.0 oo ku hoos jira lakab ka buuxo qalabka wax lagu rakibo
Telefoonku wuu la shaqeeyaa Android 7.0 Nougat oo ka hoosaysa lakabka 'Mifavor' ee ZTE. Iskuxirku wuxuu ku saleysan yahay kombuyuutarrada halkii laga heli lahaa khaanadda abka ee caanka ah. Maaddaama aan shaqsiyan sifiican ujeclahay nidaamkan, aniga waxba igama dhibeyso, inkasta oo haddii aadan ula qabsan dhowr maalmood aad heli doontid warkiisa. Xusuusnowna inaad marwalba rakibi karto launcher khaas ah.
Nidaamku wuxuu na siiyaa waxyaabo aad u faa'iido badan, sida qaabeynta codka ama maareeyaha bateriga. Dhibaatadu waxay la timaaddaa boobka. Taleefanka, sida caadiga ah qalabka ZTE, wuxuu la yimaadaa tiro badan oo ciyaaro iyo codsiyo horay loo sii rakibay.
Inkastoo ay run tahay barnaamijyada qaarkood waad iska saari kartaar, sida ciyaarta oo dhan demos oo u yimid heer, waxaa jira codsiyo qaarkood oo aadan awoodi doonin inaad tirtirto, luminta meel aan loo baahnayn. Gaar ahaan qaabka 16GB.
ZTE wuxuu ku sharxayaa xaqiiqda dalwaddii iyadoo la socota ZTE Blade V8
Faahfaahinta aan aad ula yaabay markaan furay sanduuqa ayaa ahaa isla sanduuqa ayaa isu rogay muraayado run ah oo kaamil ah oo loo yaqaan 'Google Cardboard-style'. Waxaan horeyba isugu dayay xalkaan waqtigaas, aniga oo aanan gaarin dareenka lagu gaarey Samsung Gear VR, waa inaan dhahaa in laga bilaabo aduunka ee xaqiiqda dalwaddii ay aad u wanaagsan tahay. Iyadoo la tixgelinayo in sanduuqa uu noqonayo muraayadaha VR, haddii aadan haysan qalab noocan ah, ZTE ayaa kuu xallin doonta warqadda codbixinta. Oo aanad bixin euro dheeraad ah.
Optics-ka waxay la mid yihiin kuwa ay adeegsadaan Kaararka Google sidaa darteed waxqabadka waa mid aad u wanaagsan oo Waxaan ku daawan karnaa waxyaabaha ka kooban VR-ka ZTE Blade V8 si sax ah. Shaashadeeda Full HD iyo tayada codka oo aad u fiican ayaa kaa caawisa khibrada xitaa ka sii fiican.
In kasta oo ay tahay inaad sanduuqa gacanta ku qabato, had iyo jeer waxaad sameyn kartaa dhowr god oo aad hagaajin kartaa xarkaha cinjirka si aad uga dhigto mid raaxo leh in la isticmaalo. Laakiin si aad u aragto sawirro iyo fiidiyowyo waa in ka badan intii ku filan.
Kaamiro qaadashada sawirrada 3D
Waraaqda waxaan ku haysannaa kamarado aad u awood badan, gaar ahaan kan 13 megapixel kamarad hore Waa mid aan lala tartami karin noocyadeeda. Laakiin lkamarad gadaal ah hayso layaab aad u xiiso badan tan iyo kuu ogolaanaya inaad si ay u qabtaan sawiro 3D.
Si tan loo sameeyo, muraayadaha indhaha ayaa qabta mayokala duwan ee faahfaahinta marka la ogaanayo qoto dheer iyo fogaanta, sidaa darteed waxaan qaadan karnaa sawirro saddex-geesood ah ka dibna ku daawan karnaa muraayadahaaga. Faahfaahin.
Maskaxda ku hay in sawirradu ay ahaanayaan kuwo aad isugu dhow, ugu badnaanna 1.5 mitir u jira, si aad si qoto dheer ugu soo qabsan karto oo aad u qaadi karto sawir 3D ah oo xaaladdiisu wanaagsan tahay. Ka dibna waxaa jira Saamaynta Bokeh
Nidaamyada kamaradaha laba-geesoodka ah ee bixiya sawirrada leh saameynta Bokeh ama cilladda asalka ah ayaa sii kordheysa moodada iyo natiijada lagu gaadhay ZTE Blade V8 way ka badan tahay wax la aqbali karo. Waxaan ka hadleynaa cilad ay sameysay softiweer, laakiin runta ayaa ah in sawirada qaar ay soo baxaan wacdaro.
Mararka qaar, aberrations ayaa soo muuqday, sawirro leh cilad-dabiici ah, laakiin inta badan kiisaska natiijadu aad ayey u fiicnayd. Waxaan la yaabay tayada sawirada oo, aniga oo aan gaarin heer sare ee lagu gaaro Mate 9, soo bandhig sawiro leh saameyn aad u macquul ah oo bokeh ah. Y kahadalka taleefan qiimahiisu ka yaryahay 300 euro, mudnaanta waa wax layaableh.
Kaamirada Blade V8 waxay sidoo kale u oggolaaneysaa sawir caadi ah, sidaad filan lahayd. Xaaladdan oo kale waxaan ka helnaa xoogaa qabasho ah oo qaar bixisa midab cad, fiiqan oo si wanaagsan isu dheellitiran inta aan sawiro ku qaadaneyno deegaanno si fiican u shidan.
Gudaha gudaheeda sidoo kale si fiican ayey u dhaqantaa, in kasta oo aan wax yar ka qiimeyn karno iftiin la'aanta. Meesha kamaradda taleefanka cusub ee ZTE uu dhibka ugu badan ka soo gaaro waa sawirka habeenkii. Sida ugu badan ee telefoonada, waxaan arki doonaa buuqa laga baqo. Kaamiradu waxay leedahay toosh LED ah oo wax yar iftiimin doona, laakiin haddii aan dooneyno inaan sawirno muuqaalka muuqaalka habeenkii aad ayaan u adkeyneynaa haddaan rabno sawir wanaagsan. In kasta oo taasi ay tahay kaamirooyinka xirfadeed ee loogu talagalay Nasteexo, in sawirkaas habeenka ah ee diskooga ah, ama aad la casheynayso asxaabtaada, ay ka badnaan doonto gudashadeeda.
Intaa waxaa dheer softiweerka kaamerada ee ZTE Blade V8 wuxuu leeyahay tiro badan oo xulashooyin ah oo furaya fursado badan taasina waxay kuu oggolaaneysaa inaad saacado badan ku lumiso inaad ku dhex mashquusho si aad ugu ciyaarto qaababka kala duwan.
Gaar ahaan habka gacanta taas ayaa noo oggolaan doonta inaan hagaajino dhammaan cabbirka kamaradda, sida ISO, dheelitirka cad ama xawaaraha xarkaha. In kasta oo qaabka otomaatigga ahi uu bixiyo natiijooyin wanaagsan, waxaan kugula talinayaa inaad iskaa u baratid fikradahaan maadaama sawirada aad qaadaysaa ay ka sii fiicnaan doonaan.
Shaki la'aan, ZTE Blade V8 kani waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican haddii aad raadineyso taleefan leh tayo dhameystiran, qalab kuu oggolaanaya inaad dhaqaajin karto ciyaar ama codsi kasta oo dhibaato la'aan ah, kaamiro wanaagsan iyo qiimo dhexdhexaad ah.
In ka yar 300 euro waxaad leedahay terminaal aad u dhameystiran oo si fiican u dhaqma. Aad ayey u xun tahay waxyaabaha loo yaqaan 'bloatware' ee culeyska xoogaa hoos u dhigaya khibrada isticmaalka taleefan aad u dhameystiran.
Waxay leedahay FM Radio
Tayada codka cajiib ah
Kaamiradu ha qaadato sawirada 3D si faahfaahsan
Waxyaabo badan oo bloatware ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE » ZTE Blade V8, falanqeyn iyo ra'yi